Samsung W2018 ကိုနိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည် Androidsis
မကြာသေးမီကလွှတ်တင်ပြီးသည့်နောက်တောင်ကိုရီးယားသည်ပြီးခဲ့သည့်လကပြုလုပ်ခဲ့သည် က Galaxy A9 (2018) y Galaxy A6sကုမ္ပဏီအနေဖြင့်နို ၀ င်ဘာ ၉ ရက်တွင်တရုတ်၌နောက်ထပ်ပွဲတစ်ခုကျင်းပလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထုတ်ဖော်ပြသသည့်ပိုစတာ၏ကျေးဇူးကြောင့်၎င်းသည်ဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည်။ Samsung က W2019၏ဆက်ခံ W2018 ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်း 2017 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိ။
Samsung က W2019 ပါ Samsung ၏နောက်ဆုံးပေါ် W-Series 'Cap Phone' ကိုကြေညာခဲ့သည်တရုတ်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အချိန်အတန်ကြာပေါက်ကြားခဲ့သော်လည်းထင်ကြေးပေးသောပုံများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုသာဖော်ပြခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က W စီးရီးသည် Samsung ၏အခြားစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်များအတွက်အချို့သောအင်္ဂါရပ်များအတွက်စမ်းသပ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပုံစံသည် aperture ပြောင်းလဲနိုင်သောကင်မရာရှိသည့်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ ဤစမတ်ဖုန်း၏အထူးအင်္ဂါရပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မကြားဖူးပါ။ အချို့သောယိုစိမ့်သောပုံရိပ်များက၎င်းကဲ့သို့နောက်ဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်အတူလာလိမ့်မည်ဟုအချို့သောအချက်အလက်များအရသိရသည် Galaxy Note ကို9နှင့် က Galaxy S9 +.
Samsung W2019 တွင် ၄.၂ လက်မမျက်နှာပြင်များ၊ Snapdragon 4.2 ပရိုဆက်ဆာသို့မဟုတ် Exynos 845 နှင့် ၃၀၀၀ mAh စွမ်းရည်ဘက်ထရီတို့ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် 9810 သို့မဟုတ် 3.000 GB RAM ရှိပြီးအနည်းဆုံး6GB သိုလှောင်နိုင်သည့်ပမာဏရှိသည်။ ဒါ့အပြင် အသံ jack ကိုကင်းမဲ့လိမ့်မည်W2018 ကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်အသစ်စက်စက်သို့သော်ဆင်တူသောဒီဇိုင်းနှင့်မျက်နှာဖုံးအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ အမြန်အားသွင်းခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့၊ ငွေပေးချေမှုအတွက် NFC နည်းပညာ၊ Bixby လက်ထောက်နှင့်အခြားအရာများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များပါလိမ့်မည်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကုမ္ပဏီကိုအံ့အားသင့်စေဖို့စောင့်နိုင်ရုံသာမကဒီပစ္စည်းအတွက်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးထက်ဒီဟာကဘာကောင်းလဲ။ ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » 'clamshell' ဖုန်းဖြစ်သော Samsung W2019 သည်စတင်မိတ်ဆက်မည့်နေ့ရက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ လာမည့်နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်တွင်ဖြစ်သည်
Vivo Y93 သည် ၆.၂ လက်မ HD + မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 6.2 နှင့်ထို့ထက်ပိုသည်